Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (Afaan Xaaliyaaniin: /mikeˈlandʒelo di lodoˈviːko ˌbwɔnarˈrɔːti siˈmoːni/; 6 Bitootessa 1475 - 18 Guraandhala 1564) salphumatti Michelangelon (Afaan Inglish / ˌmaɪkəlˈændʒəloʊ, ˌmɪk -/) kan beekamu, bocaa, dibaa, arkiteektii fi walaleessa Xaaliyaanii bara Haaromsa Olaanaa kan Rippaabilika Florence keessatti dhalatee guddina aartii dhihaa irratti dhiibbaa isaan qixxaatu hin qabne uumeedha. Ogeessummaan isaa sadarkaa olaanaa qabaachu irraa kan ka'e yeroo baay'ee morkotaa isaa Leonardo da Vinci Filorentine waliin akka kadhimamaa maqaa kabajaa nama haaromsaa Archetypal ilaallama. Beektonni hedduun Michelangelo akka Artiistii guddaa bara isaa fi akka artistii yeroo hundaatti ibsan.
Hojiiwwan bocaa fi arkitekture Michelangelo baay'een hojii jiran kan beekamtii guddaa qaban ta'uun sadarka keessa jiru. Inni artistii jaarraa 16 ffaa akka gaaritti Dokumente ta'edha. Hojii isaa beekamoo keessaa lama Pietà fi David kan boce osoo umurii soddoma hin genye ture. Yaada dibuu gadi aanaa qabaataati, seenaa aartii dhihaa keessatti dibaa dhiibbaa guddaa uume lama uume: scenes from Genesis ceiling of Sistine Chapel in Rome, fi The Last Judgment on its alter wall. Dizaayinii isaa mana kitaabaa Laurentian bu'uura Mannerist arkitekture ta'e. Umirii 74 tti Antonio da Sangallo bakka bu'uun arkiteekti St. Peter's Basilica ta'e. Akka Dhumni dhihaa dizayinii isaatti akka xumuramuuf karoora jijjiiree ture, akka dome jijjirameetti erga inni du' ee booda.
Michelangelo artistti lixaa osoo lubbuun jiru seenaan jireenya isaa barraawe isa jalqabaati. Seenaa jireenyaa lama yeroo jireenya isaa keessatti kan maxxanfame. Isaan kessa tokko Giorgio Vasaridhan kan barraawe.
Yeroo jireenya isaa keessatti Michelangeloon yeroo baay ' ee Divino (′′ the divine one ′′) jedhama.[7 • Yeroo baay ' ee jibbisiisaa isaa dinqisifachuu danda ' a. Yaalii artiistoota amansiisoo 's 8 8 Michelangelo ' s kan itti yaadame, haala dhuunfaa haala gaariin bu ' aa, sochii guddaa gara dhihaa aartii haaromsaa booda.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Michelangelo&oldid=37286" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 11 Sadaasa 2021, sa'aa 22:43 irratti.